Inkqubo yaManzi iIstanbul iphumelela i-BE Award kudidi lweGeospatial -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Inkqubo yamanzi e-Istanbul iwina i-Award kwi-Geospatial category
Inkqubo yamanzi e-Istanbul iwina i-Award kwi-Geospatial category
isixeko Istanbul (Istanbul) Turkey obambisene sixeko yayo phakathi Asia naseYurophu, elaziwa kwi / ixesha yamaGrike aseByzantium njengoko eConstantinople, ngoku nabantu malunga 11 million, onesiqinisekiso imilinganiselo zehlabathi kwinkqubo ezahlukeneyo nolawulo lomgangatho amanzi.
Kulo nyaka ukuphunyezwa kobuchwepheshe be-management system yamanzi kuye kwaba ngumqhubi we kwindawo yokuqala KumaBhaso ee-BE kudidi lolawulo lweziBonelelo zaManzi kumda wejografi. Qho ngonyaka, Yena Bentley Institute yenza ibhaso layo kwiingcamango ezintsha ezisebenzisa iimveliso ze-geo-ingqungquthela yomgca weBentley; Oku kwenziwa kwenkomfa yonyaka eyayiye e-Exton, ePennsylvania apho baye bakhetha abaphumeleleyo phakathi kokutyunjwa kwe-280.
Ezi zigaba zihlala zihlala:
Ukwakhiwa, iMisebenzi yoLuntu, iziMveliso, amaZiphumo awodwa, ama-Award Academic kunye ne-Geospatial.
Le projekthi ISKABIS iphuhlise kwaye iphumeze inkqubo enzima kwi-Visual Basic platform edityaniswe kwi-CAD izixhobo zomgca we-Microstation. Iimveliso abazisebenzisileyo zezi:
Microstation ukuvelisa jikelele kunye nophuhliso lweVBA
Geographics yolawulo lweprojekthi yeGIS
PowerDraft kwilayisenisi yezoqoqosho kubasebenzisi
amanzi, Amanzi amdaka kwi-hydro-sanitary system
Ukwahlukana ukwenzela unyango oluphambili lwemifanekiso
Site Inrods ukuyila kwejometri yezendlela.
Ukuthunyelwa kokugqibela kuvumela abalawuli benkqubo kunye nabasebenzisi ulawulo olunomtsalane kunye nokubonwa (kweemephu, imifanekiso ye-raster kunye nopopayi kubukhulu bezakhiwo kunye nenethiwekhi yonke ye-hydrosanitary yeIstanbul).
Nangona bawa mfutshane, mhlawumbi isigaba esilandelayo kufuneka sibe ukuhlanganiswa kweenkonzo zewebhu.
Uninzi lugxeka olu hlobo lwamabhaso, belujonga njengendlela yokubetha abo bachitha imali yabo bethenga iimveliso nje nge-ESRI esenza ngasemva, nangona ndiza kunyaniseka ... ixesha lokufumana loo mabhaso avuzayo
Yakha imigca ye-contour usebenzisa i-AutoCAD
Ngaba unomdla ngeemephu enye?
Geovanny Molina uthi:
Ndifuna ukwazi le nkqubo sibonga
Iimephu zeWebhu zivuselela iimephu zembali